प्रेमीसंग निस्किएकी बिना भिडियो कल गर्दागर्दै फिल्मि सैलिमा गायब, प्रेमीको बारेमा यस्तो खुलासा गर्दै बिनाकी आमा मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 7, 2021 AdminLeaveaComment on प्रेमीसंग निस्किएकी बिना भिडियो कल गर्दागर्दै फिल्मि सैलिमा गायब, प्रेमीको बारेमा यस्तो खुलासा गर्दै बिनाकी आमा मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
चितवन, २३ असार । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की सुजिता भण्डारी मृत अवस्थामा भेटिएको घटनाले चितवन तातिरहेको बेला चितवनबाट नै अर्की एक युवती हराएकी छिन् । सुजिता भण्डारी घटनाको अनुसन्धानमा लागेको प्रहरीलाई फेरी अर्को त्यस्तै प्रकारको घटना आएको छ । गैंडाकोटको जनक कलेजमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–४ की २१ वर्षीया बिना सापकोटा असार १४ गतेदेखि बेपत्ता भएको उनको परिवारले जनाएको छ ।
परिवारका अनुसार असार १४ गते दिउसो आधा घण्टामा घर फर्किन्छु भनेर साथिसंग निस्किएकी बिना अहिले सम्म फर्किएकी छैन । परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजीसँगै उनका प्रेमी भनिएका भरतपुर महानगरपालिका–४ का प्रवेश कँडेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । तर अहिले सम्म बिनाको अवस्था थाहा नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिनाको परिवारका अनुसार बिनाको प्रेमीसंग उनि हराउनु अघिल्लो रात फोनमा धेरै पटक कुरा गरेको खुल्न आएको छ । तर प्रेमीले भने आफुलाई थाहा नदि भागेको बताउदै आएका छन । बिनाको ५० वर्षीय बुबा जयश्वर सापकोटाका अनुसार छोरी बिना सापकोटाको खोजीमा निस्केको आठ दिन पूरा भैसक्क्यो तर अत्तोपत्तो केही फेला पार्न सकेका छैन ।
गैँडाकोट इलाका प्रहरी कार्यालय, चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बिनाको खोजीमा जुटेको जयश्वरले बताए । बिनाको बुबाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा लिखित जाहेरी दिएर छोरीको खोजी गर्न अनुरोध गरेका छन। यस बिषयमा बिस्तृत जानकारी दिन बिनाकी आमा मिडियामा आएकी छन । उनले बिनाको प्रेमीको बारेमा समेत धेरै कुराको खुलासा गरेकीछन । भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस्ः